Matanho manomwe kuNyaya Yakakwana | Martech Zone
Chitatu, December 11, 2013 Douglas Karr
Zvizhinji zvekushambadzira nekutengesa zviri kusangana nevateereri vako padanho repamoyo. Kutaura nyaya kuri padanho rekutsanangura chako chigadzirwa kana sevhisi. Kuputira pamusoro pezvinhu uye mabhenefiti zvese zvakanaka uye zvakanaka, asi kunze kwekunge mumwe munhu aona kuti urikugadzirisa dambudziko senge ravo, kugona kwavo kuti vavimbe newe zvekuti ungashandure ndeyakareba-kupfura.
Kutaurisa nyaya iri fomu yehunyanzvi - kunyangwe kana iri kungogovana anecdote nevateereri vako. Iko kugona kuronga iyo nyaya mune blog blog kana kunyange pfupi vhidhiyo inoda zvimwe zvekutanga. Iyo Zvemukati Kushambadzira Sangano yaisa pamwechete iyi infographic kuti ikubatsire kuronga yako inotevera nyaya. Zviite nhasi!
Kubva pane chimiro uye kuronga kune magamba uye vatambi, nyaya yako inofanirwa kuve nezvose zvirimo kana iri yekubatana nemuverengi. Tevedzera gwara redu pakubudirira kutaura nyaya.
Tags: cmazvemukati wekushambadzira musanganopurotikutaura nyayaStorytelling
Simba reData Mining uye Sarudzo Sisitimu Inotsigira